रोचक खबर Archives — Page3of7— KhabarTweet
मुसाले बिरालोलाई लखेटेपछि…! हेर्नुहोस् भिडियो
एजेन्सी- तपाईँले बिरालो त देखेकै हुनुहुन्छ । हाम्रो घरमा वा वरपर बिरालो देखिन्छ । बिरालो प्रायः कुनै अन्डरकभर एजेन्टजस्तै निकै सतर्क भएर डुलिरहेको हुन्छ ।त्यस्तै मुसा पनि तपाईँले देख्नुभएकै छ । बसपार्क, वा नालीका...
अव उड्ने बाइक पनि, कति छ मूल्य ? र के-के छन विशेषता ?
काठमाडौँ, २६ कार्तिक – के तपाईलाई बाइकमा चढेर उड्ने रहर छ ? अब बाइकमा चढेर उडने दिन पनि आइसकेको छ । रसियन टेक कम्पनी ‘होभरसर्फ’ चढेर उड्ने बाइकको व्यावसायिक उत्पादन र अग्रिम बुकिङ थालेको...
चीनले कृत्रिम चन्द्रमा वनाउने
चीनले कृत्रिम चन्द्रमा बनाउने भएको छ । चीनको एक कम्पनीले सन् २०२० सम्ममा सडकका बत्तिलाई विस्थापित गर्दै राती आकाश उज्यालो बनाउने गरिको फेक मुन अर्थात् ‘कृत्रिम चन्द्रमा’ बनाउने घोषणा गरेको चीनको सरकारी पत्रिका पिपुल्स...
भोजपुरमा १ सय ८९ वर्षका मानिस भेटिए
भोजपुर – अहिले सय वर्ष उमेर काटेको मानिस समाजमा भेट्न मुस्किल पर्छ । तर भोजपुरमा एक व्यक्ति १ सय ८९ वर्ष उमेरका भेटिएकाछन् । ती व्यक्ति उमेर अनुसार त्यति पाका भने छैनन । नागरिकतामा राखिएको...
जापानी युसाकु मायेजावा चन्द्रको यात्रा गर्ने संसारमै पहिलो व्यक्ति
बीबीसी एक व्यक्ति चाँडै नै चन्द्रमाको भ्रमणमा निस्कने भएका छन् । एलन मस्कको एयरोस्पेस कम्पनी स्पेसएक्सले चन्द्रमा भ्रमणमा जाने पहिलो पर्यटक यात्रीको नाम घोषणा गरेको छ । ४२ वर्षीया जापानी अर्बपती एवं व्यापारी युसाकु मायेजावा संसारको...
एजेन्सी- भनिन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ । यसमा उमेरको केही सीमा हुँदैन । यो वाक्यलाई पुष्टि गर्ने एउटा घटना जकार्तामा सार्वजनिक भएको छ । सुन्दा अचम्म लाग्ला, एक १५ वर्षका किशोरले ७३ वर्षीया वृद्धासँग प्रेम...
गोरुले दूध दिन थालेपछि ! हेर्नुहोस् भिडियो
सिन्धुपाल्चोक, भदौ १५- सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाँउपालिका वडा नम्बर –६, इचोकको पुरानागाँउका सोनाम तामाङको गोरुले दैनिक दूध दिँदै आएको छ । तामाङको गोरुले दैनिक बिहान बेलुका गरेर एक मानाभन्दा बढी दूध दिइरहेको छ । अहिले गाँउलेहरु...
दिनमा ४० वटा चुरोट पिउँछन् दुई वर्षे बालक, आमा बाबु दिक्क (भिडियो)
धेरैलाई चुरोट पिउने बानी सानै उमेरदेखि लाग्छ तर रापी पामुङ्गकासको उमेरमा भने सायदै कसैलाई बानी परेको होला । इन्डोनेशियाका दुई वर्षे बालकलाई बजारमा आमाले थापेको पसल वरिपरि फ्याँकिएका ठुटा तानेर चुरोट पिउने बानी लाग्यो...
पथरीका पाईलटको सानः गरे हेकिप्टरमै फूलमाला
पथरी- नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक पथरी मोरङका एक पाइलटले हेलिकप्टरमै इंगेजमेन्ट गरेका छन् । भर्खरै मात्र पाइलट ट्रेनिङ पूरा गरेका पथरीका अजय शेनले आफ्नो फूलमाला हेलिकप्टरमै गरेका हुन् । अमेरिकाको वाशिन्टन शेटलमा बस्ने राईले भर्खरै मात्र...
अचम्मको घाँस, जहाँ बाँदर पर-परै भाग्छ ! बाँदर रोक्न ,बाँदर घाँस
बाँदरले अचाक्ली दुःख दिन थालेपछि तामाकोसी गाउँपालिकाले बाँदर घाँस रोप्ने नीति लिएको छ । पहिलो चरणमा भीरकोटमा मोलसेस जातको घाँस रोपेर बाँदरको क्षति रोकथाम गरिएको छ । बाँदर घाँस रोपेपछि बाँदरको विगबिगी घटेको भीरकोटवासीले बताएका...